Halyaayadii Banooniga ee Qaramada Somaliya iyo Spain oo wada kulmeyn %
Halyaayadii Banooniga ee Qaramada Somaliya iyo Spain oo wada kulmeyn
Taariiqda dalkaan waa dhaxal awoowe oo mudan xasuus iyo xustid si uu ugu sii gudbo jilalka dambe .
Halyaagii kooxda Horseed iyo qaranka Somaliya Cafiif iyo Laacibkii Kooxda Barcelona Xavi Harnadez ayaa ku wada kulmay dalka Qadar .
WAA KUMA CAFIIF
Xasan Cafiif Yaxye oo lagu naaneysi jiray [ Faraska Cad] wuxuu ku dhashay (Mowshi) ee dalka Tansaaniya 1952 kii wuxuu ku barbaaray dalka Soomaaliya wuxuu ciyaarta kubbadda cagta ku soobiiray 1971 kii wuxuu u saftay Gobolka Kismaayo, wuxuu soo bandhigay ciyaar heer sare ah, durbadiiba waxaaloo magacaabay Xulka Qaranka sanadkii 1972kii, isla markiina wuxuu ciyaar caalami ah kaga hortagay dalaka Kenya, Burundi, iyo Uganda .
Waxa uu sidoo kale waqti wanagsan uu la soo qaatay kooxda Horseed isagoo la soo hooyay guul kala duwan .
Cafiif wuxuu ciyaaray (20) ciyaarood oo caalami ah wuxuuna ka soo ciyaaray dalalka Burundi, Tansaa­niya, Cadan, Kiinya, Zanzibaar, Masar iyoSuudaan, wuxuuna ka mid ahaa dhaliyayaasha dalka Soomaa­liya kuwa loogu jecel yahay.
wiil uu dhalay oo lagu magaaabo Akram Cafif ayaa hada u ciyaara dalka Qatar oo ah Marti galiyaasha koobka aduunka 2022 .
Akram Cafif ayaa noqon karo ciyaaryahankii ugu horeeyay ee u dhashay Somaliya ee ka qeeb gala koobka aduunka sanada 2018 hadii xulkiisa u soo baxan halka sidoo kale uu cayaari doono koobka aduunka ee Qadar martigalin doonto .
W/Q:Mohamed Abdi Mudey
Mijatovic Oo Muxuu Ka Yiri In Bedalka CR7 La Heli Karo
Anthony Martial ayey u badantahay inuu ka tago kooxda Man united maxaa u,sabab ah